Mpamatsy vidiny ambongadiny mpanamboatra mpamatsy kitapo 100% mpanamboatra kitapo plastika azo averina simba | Skypurl
Taorian'ny nanambarana ny fandrarana ny plastika, inona no nampiasainay ho toy ny kitapo fako? Tsy mila miahiahy momba ny fahalotoan'ny tontolo iainana intsony ianao. Izahay dia 100% biodegradable ary efa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana nandritra ny folo taona mahery.
Ny compostables repurpose dia manome safidy maharitra amin'ny plastika tokana ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanapotehana ireo fotodrafitrasa fanaovana zezika ara-barotra ao anatin'ny 90-180 andro.
Kitapo 10-50-galona dia amidy avokoa, namboarina mifanaraka amin'ny filàna
Tsy mora mivoaka.
Vita avy amin'ny fitaovana azo zezika, voajanahary 100%
Nahazo mari-pahaizana BPI
zavatra Kitapo fako tsy azo ovaina ao an-trano
Quantity 30pcs / roll
Fampiharana Kitapo an-trano / fako ara-tsakafo / fako an-jaridaina
Teo aloha: Kitapo fako avo lenta ho an'ny kitapo alika ho an'ny alika biby fiompy poapo fako maloto alika voajanahary.
Kitapo fako ao anaty fako eto an-tokontany
Kitapo fako tsy misy fako ao an-tokantrano
Kitapo fako T-Shirt azo anaovana zoro zaridaina
Kitapo fako ao an-trano
Kitapo fako azo sintomina Pla an-trano
Kitapo fako tsy misy fotony ao an-tokantrano Pla
Kitapo fako T-Shirt azo alaina ao an-tokantrano
Kitapo fako avo lenta avo lenta ho an'ny alika mpiompy ...